​ओली सरकारको चुनौती र अवसर
डी.आर.घिमिरे । अन्तत : ढिलै भएपनि सरकार गठन भएको छ । सरकारले पूर्ण आकार लिनका लागि अझै केही समय लाग्ला तथापि त्यो विश्वास जागृत भएको छ । यतिवेला सरकारकावारेमा धेरै भन्नुपर्ने कुरा केही छैन तर, पछिल्लो कालखण्डमा सर्वाधिक रुचाइएको सरकार हुनुको कारणले यसप्रति केही विशिष्ट अपेक्षा राखिएको छ । शायद ०४६ सालपछिको अन्तरिम सरकार र मनमोहनको सरकार पछि जनतामा निरासावाहेक केही पनि नभएको अवस्थामा यसप्रति… विस्तृत समाचार
​पहिलो गाँसमै ढुंगा
रमेश घिमिरे । वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहण सुखद् रहेन, किनभने गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले सत्तामा आफ्नो सहभागिता जनाएन । नेपाली जनताका लागि यो निश्चय पनि सुखद् कुरा होइन । नेपाली जनताले जुन उत्साह र उमंगका साथ आम चुनावमा नेपालको समृद्धि र स्थायी सरकारका लागि वाम गठबन्धनलाई आफ्नो प्रचण्ड मतका साथ विजयी गराएका थिए, त्यसमा तुषारापात भएको छ र फेरि पनि… विस्तृत समाचार
रवीन्द्र श्रेष्ठ । हाम्रो देशको राजनीतिमा नयाँ संकटका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यो पंक्ति तयार पार्दासम्म एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने हो वा होइन भन्ने टुंगो लागेको छैन । नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भन्ने टुंगो पनि लागेको छैन । भाषणमा मात्र दुई दलका नेताले पार्टी एकता र वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने कुरा गरिरहेका छन् । यी दुई दलका केही नेता कार्यकर्ताहरुले बहुदलीय… विस्तृत समाचार
बिन्दिया प्रधान । कहिलेकाहीँ अत्यास लाग्छ सम्झँदै दिनहरुलाई । बितेका दिनहरु बितिगए । बिगत जे जस्तो भए पनि आउने दिनहरु अवश्यै नेपाल र नेपालीहरुका लागि सुखद् भविष्य बोकेरै आउँला भनी सधैँभरी सबैले आशा गरिनै रहे । आशा र निरासा, लामो पर्खाइ । नटुंगिने हाम्रो प्रतिक्षाको यात्रा । थाहा छैन अझ कति हण्डर र दुःख लेखिएको छ नेपाल र नेपालीहरुको भाग्यमा ? अहिलेका अनेकौं चर्चा र अड्कलबाजी… विस्तृत समाचार
डी.आर. घिमिरे । ‘विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका वीच २०७४ असौज १७ गते एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा हामीले गरेका छौं । यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रुपमा हामीहरु राष्ट्रब्यापी तालमेल र वाम गठवन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छौं । हाम्रा दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यो एकता प्रयत्न २००७… विस्तृत समाचार
रमेश घिमिरे । वाम गठबन्धनले सत्ता सम्हाल्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत पार्टी एकीकरण हुन नसकेकोमा नेपाली जनता चिन्तित छन् । यस बीचमा पार्टी एकीकृत नहोस् भन्ने चाहना राख्ने विभिन्न तत्वहरु सलबलाइनै रहेका छन् । वाम गठबन्धनविरुद्ध सल्बलाइरहेका तत्वलाई खेल्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । किनभने नेपाली जनमत वाम गठबन्धनको पक्षमा प्रकट भएको छ र वाम गठबन्धनको सरकारले मात्रै स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिन… विस्तृत समाचार
​ओली, भारत र समृद्धिको सपना
विशाल छेत्री । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको अनपेक्षित काठमाडौँ भ्रमणले राजनीति तातेको छ । हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिँदा, चीनसँग सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा रणनीतिक महत्वका समझदारी गर्दा उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओराल्नलाई पटकपटक दिल्ली दौड गर्नेहरु अहिले काठमाडौँमा पाहुनाका रुपमा आएका भातीय विदेशमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटलाई अतिरञ्जित ढंगले चर्चा गर्दै छन् । हिजो आफू पद प्राप्त गर्न दिल्ली दौड गर्दा स्वाभाविक ठान्नेहरुलाई… विस्तृत समाचार
​भ्रमणमा शंका नगरौं
प्रदीप ज्ञवाली । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमण मुलतः तीनवटा कुरामा केन्द्रित थियो । पहिलो, आफू निश्चित कार्यसूचीमाथि आधारित भन्दा पनि सद्भावको सन्देश बोकेर भ्रमणमा आएको र सद्भाव भ्रमण रहेको सन्देश दिनु र दोस्रो, नेपाली जनताले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको र एकै वर्षमा तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न गरेकोमा खुशियाली बाँड्न र नेपाली जनतालाई बधाई दिन आएको स्वयंले रात्रीभोजमा बताइन् । खासगरी नेकपा… विस्तृत समाचार
​मुक्त कमैया कहिले मुक्त हुने ?
वीरेन्द्र रावल । दास प्रथा, जातीय विभेद अनि रंगभेदको बारेमा एकताका विभिन्न एनजीओ, आइएनजीओको प्रायोजनमा स्थानीय एफएम रेडियो र पत्रपत्रिकामा खुबै समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्थ्यो । नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले चार जात छत्तीस बर्णको फुलवारी भनेर जात जातीमा बिभाजन गरे । नेपाल एकीकरण पूर्व पनि बाईसे र चौविसे राज्यहरु थिए । ती राज्यहरु मध्ये जातीय विभेदको गन्ध कमै मात्रामा देखिने राज्यहरु पनि केही थिए ।… विस्तृत समाचार
​पुँजीवादी लोकतन्त्र र समाजवादी क्रान्ति
रवीन्द्र श्रेष्ठ । अहिले कतिपय बुद्धिजीवीहरुलाई पूँजीवादी व्यवस्था नै सबभन्दा उत्तम जनपक्षीय व्यवस्था हो भन्ने भ्रम बढ्न थालेको छ । पूँजीवादी बजार अर्थतन्त्र र पूँजीवादी संसदीय लोकतन्त्र नै संसारको सबभन्दा राम्रो व्यवस्था भएको उनीहरुलाई लाग्दछ र समाजवाद तथा साम्यवादी व्यवस्थाको आवश्यकता र अनिवार्यता छैन भन्ने उनीहरुको दावी रहने गर्दछ । तर यथार्थता यसको ठीकविपरीत रहेको छ । विश्वमा हरेक वर्ष करिव ९० लाख मानिसहरु खान… विस्तृत समाचार